တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ ...
Posted by မေဓာဝီ at 9:34 AM
ကျေးဇူးပါဗျာ မမေဓာ။ ကျနော်တော့ တကယ်ပဲ အမျိုးသားနေ့မှန်း သိကို မသိလိုက်ဘူး။ မြန်မာပြက္ခဒိန်လေးတော့ ၀ယ်အုံးမှ။
I won't forget that day,ah mha. I have just uploaded the students' union song to fileden. If u want it, u can download it at http://www.fileden.com/files/2006/8/22/180478/Students-Union-song.mp3
ဖတ်ဖူးသမျှတွေကို အခုလို ဝေမျှပေးတာ အထူးကျေးဇူးပါ အမ
မနေ့ကမမေဓာဝီ (သတ်ပုံမှန်ရဲ့လားမသိ ဟီး ဟီး) ရဲ့ဘလော့ဂ်မှာ postတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်ဖတ်တာ
ကောင်းမှကောင်း။ အမရေအမစာတွေဖတ်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်စာရေးရမှာတောင်ရှက်တယ်ဗျာ။
စာရေးတကယ်ကောင်းတယ်။ အရင်တုန်းက ဘာလို့မဖတ်မိပါလိမ့်နော်။ အားကျတယ်ဗျာ။
C box မတွေ့လို့ ဒီကပဲအော်လိုက်တယ်
11/15/2006 6:19 AM
gen’96 - ဒီလိုပဲ အမှတ်တမဲ့ ဖြစ်နေသူတွေအများကြီးပါ။ မြန်မာပြည်ကလူတချို့တောင် ရုံးပိတ်ရက် ကျောင်းပိတ်ရက်မို့ အမျိုးသားနေ့မှန်းသိကြတာ။ မပိတ်ရင် သိမှာတောင်မဟုတ်ဘူး။ အမျုိုးသားနေ့ရဲ့ သမိုင်းသိဖို့ဆို ဝေးရော။
ကိုသီဟ - သီချင်းမျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
ကိုသံလွင်, kgyg ei - ကွန်မန့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆက်လက်အားပေးကြပါအုံး။
ma may darr wii
good tel byar.. shar shar par par ko shar yay htar dar.. kyay zuu ayan tin bar del..
tay za or ka daung nyin thar
ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် မမေ ရေ အခု လေ ညီမ တို့ က အမျိုးသားနေ့တောင် မပိတ်တော့ သူများတွေပြောမှ အော် ဟုတ်သာပဲ ဆိုပြီး ဖြစ်ကြရတာ
အားလုံး သတိရအောင် အခုလိုရေးပေးတာကိုကျေးဇူးနော် မမေ